सभामुख विवाद नयाँ मोडमा - नेपालबहस
सभामुख विवाद नयाँ मोडमा
| १६:०३:२१ मा प्रकाशित
१ माघ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र सभामुखको विषयमा बढेको विवादले नयाँ रुप लिने देखिएको छ । खासगरी पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच बढेको असमझदारीले पार्टी भित्रको समीकरण नै बदलिने अवस्था निर्माण भएको हाे ।
विगत तीन दिनदेखि प्रधामन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच सम्वादसमेत हुन सकिरहेको छैन । बरु प्रचण्ड र अर्का नेता माधवकुमार नेपालबीच भने सम्बन्ध झाँग्गिन सुरु भएको छ । गत आइतबार प्रचण्ड र नेता नेपालबीच नयाँ बानेश्वरस्थित अर्याल होटलमा लामै वार्तालाप भएको छ ।
त्यस अवसरमा एकता महाधिवेशनसम्म पूर्वसहमति बमोजिम नै भागबण्डामा जाने सहमति बनेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार, हाल विवादमा ल्याइएको सभामुखका विषयमा पूर्वसहमति बमोजिम पूर्वमाओवादीलाई दिनुपर्ने पक्षमा नेपाल सहमत भएका छन् । त्यसका लागि आफ्नो पूर्ण सहयोग र समर्थन रहने बचन माधव कम्रेडले दिनुभएको छ–प्रचण्ड निकट एक नेताले बताए ।
सभामुखको मात्र होइन, पूर्वमाओवादीलाई गरिने व्यावहार र दृष्टिकोण मुख्य पक्ष हो–नेता गजुरेलले भनेका छन् । एकता महाधिवेशन नभएसम्म दुई जना अध्यक्ष राख्ने र अवसरमा भागबण्डा गर्ने पूर्वसहमतिबाट हामी चुक्यौं भने पार्टीकै भविष्य अन्धकारमा पर्ने उनको बुझाई छ । त्यसैले सभामुख प्रकरणलाई हामीले हाम्रो हैसियत र अवस्था परीक्षण गर्ने अवसरका रुपमा लिएका हौं
तर पहिला दुबै अध्यक्षबीच सहमतिमा नाम ल्याउने प्रयास गर्नुस् भन्दै नेता नेपालले प्रचण्डलाई भनेका छन्–ओली र तपाईंको कुरा मिलेन भने यो विषयलाई सचिवालयले टुंग्याउने छ । उक्त भेटघाटबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी भएपछि प्रचण्डसँगको सम्वन्धमा थप चिसोपन बढेको बुझाई सत्तारुढ दलकै नेताको रहेको छ । प्रचण्ड निकट नेता हरिबोल गजुरेलले नेता नेपालसँगको भेट विशुद्ध राजनीतिक हो, यसलाई सामान्य रुपमा लिनु पर्छ भन्दै यसलाई ठूलो विवादको विषय बनाउन नहुने बताए ।
तर वालुवाटारले भने नेता नेपालसँगको प्रचण्डको हिमचिमलाई षडयन्त्रको दृष्टिले हेरेको छ–पूर्वएमालेका अर्का नेताले बताएका छन् । कम्तिमा सभामुख चयनका विषयमा अब प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई सहज बनाउने अवस्था रहेन, हेदै जाउँ के हुन्छ–ती नेताले भने ।
गत शनिबार सचिवालय बैठकले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा दिएर बाटो खोल्न निर्देशन दिएको थियो । तर उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले सचिवालय निर्णयलाई चुनौती दिंदै राजीनामा नगर्ने उद्घोष गरिन् । उपसभामुखको उक्त निर्णयका पछाडि बालुवाटार र शितल निवासको धाप रहेको बुझाई प्रचण्ड र नेता नेपालको रह्यो । त्यसैले यसलाई चिर्न पनि अब निर्ममतापूर्वक अघि बढ्नै पर्ने निश्कर्ष दुबै नेताले निकालेका छन् ।
अहिले पनि सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन भएन भने अब हुने कुनै पनि निर्णयको अर्थ नरहने भन्दै नेता नेपाल र प्रचण्डले कडा कदम चाल्ने सोच बनाएका हुन् । त्यसका लागि एकपटक उपसभामुखसँग छलफल गर्ने त्यसपछि पनि निकास आएन भने निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरी उनको नाम समानुपातिक सूचीबाट हटाउने तयारी गरिएको बुझिएको छ ।
पूर्वएमाले भित्रका ओली गुटको बुझाई चाहिं अलि बेग्लै छ । ओलीलाई कमजोर देखाउन नै अहिले नेपाल लगायत पूर्वएमालेमा आफूसँग असहमत पक्षले उकासेकाले प्रचण्ड उफ्रिएका हुन् । नत्र सभामुखमा सुभाषचन्द्र नेम्बाङलाई ल्याउने विषयमा ओली र प्रचण्डबीच सहमति भइसकेको थियो, यो बवण्डर कसरी आयो ?
तर यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीको संलग्नता छ भने नेपाल र प्रचण्डले सोचे अनुसारको निर्णय गर्न सजिलो हुने छैन । स्रोत भन्छ, ओलीको सहमति र विश्वास बिना प्रचण्ड अगाडि बढ्ने अवस्था आयो भने उनकै हैसियत कता पुग्ने हो, भन्न सकिन्न । तर प्रचण्ड पनि यो प्रकरणमा पछि हट्ने अवस्थामा छैनन् । किनभने अहिले प्रचण्ड गले भने सधैंका लागि ओली नै हावी हुनेछन् । त्यसैले सचिवालको बहुमतबाटै भएपनि यो प्रकरणमा प्रचण्ड अगाडि बढ्न बाध्य छन् ।
कुरा सभामुखको मात्र होइन, पूर्वमाओवादीलाई गरिने व्यावहार र दृष्टिकोण मुख्य पक्ष हो–नेता गजुरेलले भनेका छन् । एकता महाधिवेशन नभएसम्म दुई जना अध्यक्ष राख्ने र अवसरमा भागबण्डा गर्ने पूर्वसहमतिबाट हामी चुक्यौं भने पार्टीकै भविष्य अन्धकारमा पर्ने उनको बुझाई छ । त्यसैले सभामुख प्रकरणलाई हामीले हाम्रो हैसियत र अवस्था परीक्षण गर्ने अवसरका रुपमा लिएका हौं–नेता गजुरेलले भनेका छन् ।
तर पूर्वएमाले भित्रका ओली गुटको बुझाई चाहिं अलि बेग्लै छ । ओलीलाई कमजोर देखाउन नै अहिले नेपाल लगायत पूर्वएमालेमा आफूसँग असहमत पक्षले उकासेकाले प्रचण्ड उफ्रिएका हुन् । नत्र सभामुखमा सुभाषचन्द्र नेम्बाङलाई ल्याउने विषयमा ओली र प्रचण्डबीच सहमति भइसकेको थियो, यो बवण्डर कसरी आयो ? अचम्म छ–ओली निकट नेताको भनाई छ ।
त्यसैले पनि अब यो प्रकरण पेचिलो बनेको हो–उनले भने हामीले दावी छाड्ने वित्तिकै ओलीले अब प्रधानमन्त्री चलाउन सक्दैन भन्ने हौवा फिंजाउने काम हुने छ । प्रधानमन्त्री ओली यो प्रकरणमा तत्काल केही बोल्ने पक्षमा हुनुहुन्न–उनले भने हेरौं प्रचण्ड र माधव कम्रेडले कसरी निकास दिनु हुँदो रहेछ ?
यी नेताको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने माघ ६ गते पनि सभामुख चयनको विषयले निकास पाउने देखिंदैन । यसरी सम्वादहिनताको अवस्था कायमै रहने हो भने निकास आउने कुरै भएन । त्यसको अर्थ हो ओलीको सर्वसत्तावादको लाचार छायाँको शिकार संसद्मा पर्ने छ । त्यसै पनि संसदीय व्यवस्थालाई निरर्थक साबित गर्न लागिपरेको कम्युनिष्ट अभिष्टलाई बल पुग्ने अवस्था प्रजातन्त्रवादीहरुका लागि ठूलै चुनौती हो ।
नेपाली कांग्रेसले यो मुद्धालाई अहिलेसम्म सडकमा लैजान नसक्दा आम नेपालीको चाहना र भावना नै बन्धक बनेको छ । संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राखेको कम्युनिष्ट सरकारलाई खबरदारी गर्न आम जनतालाई सडकमा उतार्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
विधि विधान एकातिर राज्य सञ्चालन अर्कोतिर ४ घण्टा पहिले
डा. खतिवडाको नियुक्तिले बल्झायो नेकपाभित्रको घर झगडा ६ घण्टा पहिले
बामदेवको फैसला नभएसम्म मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन रोकियो १ दिन पहिले
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा तगारो बने गौतम २ दिन पहिले
ओलीको प्रतिगामी तयारी नेता व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय टुक्र्याउँदै २ दिन पहिले
पुनर्गठनमा बढ्यो सकस : ओली र प्रचण्डबीचकाे छलफल निष्कर्षबिहीन ३ दिन पहिले
विमानस्थल निर्माणमा संघ र प्रदेश सरकारबीच साझेदारी भर्खरै
प्रज्ञा–प्रतिष्ठानद्वारा ‘लोकसाहित्य सिद्धान्त’ नामक बृहत् ग्रन्थ प्रकाशन ५ मिनेट पहिले
वनसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबीन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन माग ७ मिनेट पहिले
डिजेल र मटितेलको मूल्य १ रुपैयाँ घट्यो ७ मिनेट पहिले
विभिन्न मुद्दाका फरार ८ अभियुक्त पक्राउ १० मिनेट पहिले
विषम स्थिति सर्जकका लागि अवसर पनि हो : कुलपति उप्रेती १२ मिनेट पहिले
कोटेश्वरका व्यापारी हत्याकाण्डको मुद्दामा पुनः सुनुवाइ हुने १४ मिनेट पहिले
ढोरपाटनका बाढीपहिरो पीडितलाई प्रभु बैंकको ५ लाख सहयोग ३७ मिनेट पहिले
यी हुन् असोज १५ गतेका मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु ३८ मिनेट पहिले
भारतबाट आयातीत विषाक्त रसायनयुक्त माछाको बिक्रीमा रोक ४४ मिनेट पहिले
भोजपुरमा वास्तविक कृषकसम्म पुगेन राज्यको अनुदान ४८ मिनेट पहिले
बिना धितो कुमारी बैंकको आकर्षक मार्जिन लेन्डिंग कर्जा योजना ५२ मिनेट पहिले
स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पुष्टि भएपछि सेवा बन्द ५३ मिनेट पहिले
कर्मचारीलाई कोराेना पुष्टि भएपछि सेवा प्रभावित ५८ मिनेट पहिले